Corona भाइरस 'lethality | Apg29
चीन मृत्यु भएका ती 79 वर्ष को एक औसत उमेर थियोð
यसलाई म यो लेख्न रूपमा हालसम्म यस वर्ष थाहा रोचक हुन सक्छ, 2.131 मान्छे 67,839 संसारभरि नियमित फ्लू देखि मृत्यु गर्दा coronavirus को मृत्यु भयो। यो मौसमी फ्लू, जो जीवन अत्यन्तै थप हताहत coronavirus भन्दा यस वर्ष दावी छ आउँदा जहाँ आतंक छ?
2 प्रतिशत संक्रमित मरिरहेका (50 को 1) को coronavirus जोखिम द्वारा ती को। को मृत्यु दर 10 प्रतिशत संग तुलना सार्स र 34 प्रतिशत MERS ।
Corona भाइरस नै घातक छैन। तथापि, संग सम्झौता प्रतिरक्षा प्रणाली, बिरामी र वृद्ध मान्छे, ठूलो जोखिममा छन्। मृत्यु भएका ती चीन मा 79 वर्ष को एक औसत उमेर थियो।
यसलाई म यो लेख्न रूपमा हालसम्म यस वर्ष थाहा रोचक हुन सक्छ, 2.131 मान्छे बेला coronavirus को मृत्यु 67,839 संसारभरि नियमित फ्लू देखि मृत्यु छन्। तपाईं अनुपात देख्नुहुन्छ?
यो मौसमी फ्लू, जो जीवन अत्यन्तै थप मृत्यु coronavirus भन्दा यस वर्ष दावी छ आउँदा जहाँ आतंक छ?
यांगचोपिंग मा महिला
केही हप्ता अघि यो Jönköping मा हेरचाह गर्ने एक महिला बाहिर trumpeted थियो। यो यति टाढा स्वीडेन मा coronavirus मात्र पुष्टि मामला छ।
त्यो 31 जनवरी देखि अस्पतालमा भएको छ। अब हामी कुरा उनको लागि जाँदैछन् कसरी केही सुन्न। अस्पताल गोपनीयता आदर कुनै पनि जानकारी खुलासा छैन।
तर तिनीहरूले जब उनको रोग बारे trumpeted केही हप्ता अघि "गोपनीयता" देखिन्थे त महत्त्वपूर्ण हुन। एक किन आश्चर्य हुन सक्छ।
संक्रमित गरिएको होने पछि गर्मी चालू अवधि 2-24 दिन को बीचमा हुन्छन्। एक व्यक्ति प्रभावित कि रोग अघि 24 दिन सम्म लागि भाइरस ले यो हालतमा।
फैलाउने अनुमान गरिएको छ34 अन्य मानिसहरूलाई बीच संक्रमण जोखिममा एक संक्रमित व्यक्ति भनेर। पाँच पटक थप घातक रोग सार्स लागि, यो आंकडा कम थियो: एक संक्रमित व्यक्ति दोस्रो संक्रमित
केही मेल खाँदैन
जब म पहिलो coronavirus सुने , म तुरुन्तै प्रतिक्रिया र केही कुरा सही थियो कि भावना मिल्यो। र त्यसपछि तपाईंलाई थाहा हुनुपर्छ कि यो यति धेरै बिरामी र मृत्यु, तर अझै पनि ड्रम मा पूर्ण पिटे र भाइरस चेतावनी दिए थिएन जब।
अब मृत्यु र बिरामी तर सामान्य मौसमी इन्फ्लूएंजा तुलनामा अझै पनि धेरै छैन। मेरो शङ्काको केही गलत छ भनेर, यो एक standoff छ।
यो लेखन, को रूपमा 75,782 शुरू भएको coronavirus। ती को, 2.131 गर्दा मृत्यु 16,971 बरामद गरेको छ।
यो चीन मा मेगा-शहर मा संगरोध मा लाखौं मानिसहरू राख्नु भएको छ। सबै मा, हुबेई प्रांत मा 56 लाख मान्छे बाहिर संसारबाट shielded र जनसंख्याको ठूलो भाग घर भित्रका रहन आज्ञा छ।
coronavirus प्रभावित छन् कति मान्छे विचार र धेरै मानिसहरू नियमित फ्लू देखि मर्न कसरी, यो तपाईं लिन आमूल उपाय कुनै पनि राइम वा कारण हुन छैन जस्तो देखिन्छ।
चीनको केन्द्रीय बैंक नोटहरू, संकलित हुनेछ disinfected र 14 दिनको लागि माथि बन्द प्रयोग गर्न घोषणा गरेको छ। त्यसपछि तिनीहरूले बजार मा फेरि जारी छन्।
दुई हप्ता संगरोध
राजधानी मा उनि यात्रा भएपछि बेइजिङ बासिन्दा आफ्नो अपार्टमेन्ट मा दुई हप्ता quarantined हुनुपर्छ।
सवारी यातायात निषेधित छ
सवारी यातायात हुबेई प्रांत, जहाँ coronavirus सबैभन्दा हिट छ अहिले निषेधित छ। Exemptions प्रहरी कार, एंबुलेंस, आवश्यक सामान वा अन्य वाहन सार्वजनिक सेवामा संलग्न को वाहनहरु लागू हुन्छ।
नियमित स्वास्थ्य जाँच हुबेई प्रांत मा सबै बासिन्दा मा गरिनेछ। कम्पनीहरु सञ्चालन तिनीहरूले सरकारबाट अनुमति प्राप्त गरेका सम्म पुनः सुरु गर्न सक्छ।
थप अनुगमन र नियन्त्रण
मैले धेरै सुरुमा त्यहाँ coronavirus पछि अर्को एजेन्डा हुन सक्छ कि चिन्ता छ छ। र म त विचार गर्न सक्ने मात्र कुरा यो थप अनुगमन र यसको नागरिक निगरानी पूरा गर्न चाहन्छ भन्ने छ।
चीन विश्वको सबैभन्दा नियन्त्रण र अनुगमन देशहरूको एक जस्तो देखिन्छ। यो अहिले पनि थप नियन्त्रण र अनुगमन हुनेछ? coronavirus पनि हामी थप नियन्त्रण र पश्चिम मा यहाँ अनुगमन चाहिन्छ भनेर बहाना हुनेछ?
चाँडै, चीन तिनीहरूले curb र संसारको ताली गर्न भाइरल रोग रोक्न व्यवस्थित गरेको कराउन, तर तिनीहरूले पनि अझ यसको नियन्त्रण र अनुगमन उपकरण विस्तार दृश्य पछाडि हुनेछ?
म भर्खरै पढ्न vt.se "तेस्रो दिनको लागि चीन मा रोग को नयाँ दर्ता अवस्थामा संख्या कम गर्छ। त्यहाँ देश लिएको को उपाय स्वास्थ्य चीनको मंत्रालय को लागि एक प्रवक्ता अनुसार, प्रभाव लिन सुरु प्रमाण हो।" भनेर खैर, राम्रो, म बस लेखे के विचार।
हामी गम्भीर समयमा बाँचिरहेका छौं यो अन्तिम समय हो भनेर स्पष्ट संकेत र येशू ख्रीष्ट चाँडै आफ्नो जन्म-फेरि इलाकाका सुरक्षित प्राप्त गर्नेछ। के तपाईं येशू प्राप्त गरेका छन्? तपाईं सुरक्षित हुनुहुन्छ? यो तपाईं अब यो प्राप्त गर्न को लागि उच्च समय छ!
सार्स (रोग) - विकिपीडिया
MERS-CoV - विकिपीडिया
Corona भाइरस अपडेट (प्रत्यक्ष): 76,206 मामला र 2.247 COVID-19 वुहान चीन भाइरस फैलन बाट मृत्यु - Worldometer
Ryhov अस्पताल इन्कार स्वीडिश Corona रोगी को अद्यावधिक - सामुदायिक समाचार
ताइवान मा भाइरस को पहिलो घातक मामला
मुद्दा: coronavirus | Apg29